सुँगुरको मासु खाएपछि शरीरभरि भेटिए फित्ते जुका
कोशी अनलाइन सोमबार, १६ मङि्सर, २०७६ मा प्रकाशित
विराटनगर, १६ मंसिर । आधी पाकेको सुँगुरको मासुको सेवनले चीनका झु जोन्गफाको शरीरमा ७ सय बढी परजीवी फित्ते जुका अर्थात् टेपवर्म भेटिएका छन् । चीनका ४६ वर्षका झूका शरीरमा भेटिएको जुका दिमागदेखि मृगौलासम्म पुगिसकेको थियो ।
चीनका मडियाका अनुसार झुलाई अस्पताल पुर्याउँदा उनको मुखबाट फिँज निस्किएको र उनी बेहास भएका थिए । झुको उपचारको क्रममा डाक्टरहरूले झुको शरीरमा भेटिएको फित्ते जुकाको अण्डा पेटसम्म पुगिसकेको र रगतमार्फत् शरीरभरि फैलिसकेको पत्ता लागेको छ ।
फित्ते जुका सुँगुरको मासुमार्फत् उनको शरीरभित्र प्रवेश गरेको र बिस्तारै जुकाले आफ्नो संख्या बढाइरहेको डाक्टरहरूले बताए । डाक्टरका अनुसार फित्ते जुका टिनिया सोलियम संक्रमणबाट हुने रोग हो र झु टिनिएसिसबाट पीडित रहेका छ । जुकाको लार्भा राम्रोसँग नपाकेको सुँगुरको मासु तथा दुषित खानामार्फत् शरीरभित्र पुग्छ ।
झुले एक महिनाअघि सुँगुरको मासु खाएका थिए जुन पूर्ण रूपमा पाके वा नपाकेको राम्रोसँग उनलाई थाहा भएन । उक्त मासु खाएको एक हप्तापछि स्वास्थ्यमा समस्या देख्न थालेपछि उनले डाक्टरलाई सम्पर्क गरेका थिए । फित्ते जुकाबाट संक्रमण भएको अवस्थामा अत्यधिक टाउको दुख्ने, अँध्यारो छाउने, अट्याक हुने, बिर्सनेलगायतका लक्षण देखिन्छन् ।
झियांग युनिभर्सिटी अफ मेडिसिनसँग सम्बन्धित अस्पतालका डा. जियानरन्गका अनुसार झुको दिमाग र छातीको स्क्यान गरेपछि रिपोर्टमा फित्ते जुकाको पुष्टि भएको छ । मष्तिस्कबोहक फोक्सो र टाउकोको मांसपेशीमा पनि जुकाले संख्या बढाइरहेको छ । एन्टी प्यारासाइटिक औषधि दिएर जुका र लार्भालाई मारिइसकिएको भए पनि उपचार भने पूरा नभएको डा. हुआंगले बताएका छन् । डाक्टरहरूले मासु राम्ररी पकाएर मात्र खान सल्लाह दिएका छन् ।
कोरोनबाट मृत्यु हुनेको संख्या १ लाख कट्यो
कोशी अस्पतालमा कोरोनाको परीक्षण सुरु, ५ घण्टामा रिपोर्ट आउने
इजरायलमा कोरोना सङ्क्रमितको उपचारका लागि रोबोटको प्रयोग
अमेरिकामा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या १७ हजार कट्यो
कोरोनाबाट मृत्यु हुनेहरुको संख्या एक लाख नजिक
भोजपुरमा लकडाउनमा कडाई गर्न प्ले कार्ड अभियान